01 / 02 / 2019 25 / 11 / 2019 ရော့ Paton 3852 Views စာ0မှတ်ချက် 2019, 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်!, Batman, D2C, Emmet, အထူးအခွင့်အရေးရှိသော, Green Lantern, Harley Quinn, Lego, Lego အရူးမက်စ်, Lego ၏ဝံ, Lucy, ရေးခြစ်ရဲ, The Lego ရုပ်ရှင် 2, The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art
70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါ၏။ ငါတို့အရင်ကမတွေ့ဖူးသောအရာများနှင့် The from the standout မှန်သည် Lego ရုပ်ရှင် 2: ဒုတိယ Part
စျေးနှုန်း: £ 279.99 / $ 299.99 / € 299.99 အပိုင်းပိုင်း: 3178 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများအဖြစ်အကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်သည့်အစဉ်အဆက် - တိုးပွားလာသောစုဆောင်းမှုတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်။ ကဲ့သို့သောတည်ဆောက်၏မကြာသေးမီကခြေရာကိုအောက်ပါ ၁၀၂၆၁ Roller Coaster, ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် နှင့် တိမ်တိုက်မှာ 75222 သစ္စာဖောက် Cityဤအသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ကွင်းခတ်စုံများသည်အခြားအရာများအကြား - ၄ င်းတို့၏စျေးနှုန်း၊ ကြီးမားသောအရွယ်အစား၊ တည်ဆောက်မှုနည်းစနစ်များ၊ အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းအားပြသထားသည့်အသေးစိတ်နှင့်ဂရုစိုက်မှု၊ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များဖြင့်အပိုင်းအစများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့်ထူးခြားသောအသေးစားဓာတ်ပုံများဖြစ်သည်။
70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ် အားလုံးတူညီတဲ့အကွက်များကိုအမှန်ခြစ်ပေးပြီးအရေးကြီးတာကတစ်ချိန်တည်းမှာ ap ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်art သူတို့အားသည်အခြား supermassive ကနေ Lego တကယ်တော့ငါတို့အရင်ကဒီလိုပုံစံမျိုးမတွေ့ခဲ့ဖူးဘူးတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အချက်ကိုသတ်မှတ်ပေးတယ်။ Lady Liberty ၌တည်ဆောက်ခဲ့သောကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်ထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်အောက်ခြေနှင့်လျှောက်ထားသောပုံမှန်မဟုတ်သောပုံနှင့်ခြေရာကိုလည်းကောင်း၊ ဗဟိုရုပ်ထုတဝိုက်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်အဆင့်ဆင့်သေးငယ်သောအဆောက်အအုံများမှလည်းကောင်းထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြည့်ကိုကြည့်နိုင်ထက်ဒီအစုံမှအများကြီးပိုရှိပါသည်။
အဲဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်၊ 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ် ထို့အပြင် ap ထိုင်တော်မူ၏art ၎င်း၏လျော့နည်း - ထက် - လုံးလုံး - အထင်ကြီးပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ကြုံသည်။ ဘယ်မှာတရားဝင်ပုံရိပ်နှင့် box ကို art ၏အကြိုက်အဘို့ roller Coaster, Hogwarts ရဲတိုက် နှင့် တိမ်တိုက်မှာသစ္စာဖောက် City လက်ငင်း wow နှင့်လွယ်ကူရောင်းချဘို့လုပ်, box ကို art နှင့်တရားဝင်ပုံရိပ် 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ် မဟုတ်ဘဲ၎င်း၏နိဒါန်း dampens ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုများစွာစိတ်ကျေနပ်စေမည့်ထောင့်များသည်ယင်း၏အရှိဆုံးသောလက္ခဏာကိုပျက်ကွက်စေသောကြောင့်လူသားသဘောသဘာဝကိုသင့်မျက်လုံးထဲပထမဆုံးဆွဲဆောင်နိုင်မည့် - Lady Liberty ၏မျက်နှာ။ တောက်ပသောအလင်းရောင်အောက်နှင့်တိုက်ရိုက်ထောင့်မှကြည့်လျှင်ကောင်းမွန်သောပုံနှင့်သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာအချိုးကျသည် Lego ထင်ရှားကျော်ကြားသောသဲအစိမ်းရောင်အမျိုးသမီး၏မျက်နှာကိုကိုယ်စားပြုခြင်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပြားချပ်ချပ်ချဲ့ပြီးပုံကြီးချဲ့နေသည်
သေတ္တာ၏ရှေ့မှောက်ရှိပုံရိပ်မှနောက်ကျောနှင့်အနှံ့ရှိသူများအထိ Lego websiteပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်ဖြင့်ကြည့်လျှင်သူမဖော်ပြချက်တွင်အမှန်တကယ်မဟုတ်သောထင်ရှားသည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုမည်သူမျှအမှန်တကယ်ဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ ဒီအစုကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားသောအခါ, သူက၎င်း၏ဓာတ်ပုံမဟုတ်ရင်အထင်ကြီးနိုင်သည်ထက်လူတစ် ဦး အတွက်အများကြီးပိုလှပသောဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။
ထိုလှပမှုသည် Lady Liberty ၏အင်္ဂါရပ်များထက်မကပါ။ အမှန်မှာ၊ ဤအစု၏နောက်ကွယ်ရှိအယူအဆနှင့်ယင်း၏အသုံးချမှုသည်ကြာရှည်သော်လည်းမတူကွဲပြားသောတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်အလွန်သေးငယ်သောလှုပ်ရှားမှုဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည့်မဖြစ်နိုင်သည့်ထောင့်ကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကြီးမားသောပြိုလဲနေသောမှတ်တိုင်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရန်စိတ်ကူးနေသည်။ အကွာအဝေးမှဒီတစ်ခုဖြစ်သည် artအလွန်အင်အားကြီးမားသည့် Apes Vibes များကိုပေးသောအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအကြီးစားအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်အပြင်မက်စ်၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းမှာမူအသေးစားရုပ်သေးအရုပ်များ၏အသေးစိတ်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအိမ်ဖြစ်သည်။
တရားဝင်ပုံရိပ်မှရှာဖွေရန်မလွယ်ကူသည့်အရာမှာဆောက်လုပ်ရေးတွင် 'ယာဉ်များ' ကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အခြေခံအဆင့်အဆောက်အအုံအများစုသည်မဆောက်လုပ်သောကားများ၊ ဗင်န်ကားများနှင့်ကုန်တင်ကားများမှဖန်တီးထားပြီး၎င်းတို့သည်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းကျကျပုံစံမျိုးဖြင့်လိမ္မာပါးနပ်စွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ CITYအနည်းဆုံးတော့ DUPLO Apocalypse မတိုင်ခင်အထိဖြစ်သည်။ ဘဝသည်ဤလူဆိတ်ညံနေသောနေရာတွင် ဆက်၍ သွားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာတွေ့ပြီး ၃၆၀ ဒီဂရီတည်ဆောက်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ဖျော်ဖြေမှုအရိပ်အမြွက်များစွာနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာရှိသည်။
ဤအရာများသည်ပုန်းအောင်းနေသောနေရာများနှင့်အုတ်တံတိုင်းများဖြစ်သော Statue of Liberty ပတ်ပတ်လည်ရှိလူနေထူထပ်သောမြို့တစ်မြို့ကိုဖန်တီးပေးသောနေရာများနှင့်ဆုံတွေ့ရာနေရာများဖြစ်သည်။ ယင်းတို့အနက်ဒုတိယထပ်တွင်အိပ်ယာခင်း (Bat-sit၊ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းရှိ) Batmanနှင့် Scribble Cop ရဲ့မြေညီထပ်ရဲ့ရဲဌာနအပြင်တက်တူးထိုးဆိုင်တစ်ဆိုင် (ဆံပင်ညှပ်သူတစ် ဦး လည်း)၊ စျေးကြီးတဲ့ကော်ဖီဆိုင်၊ အားကစားရုံနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ။ အရာအားလုံးကိုအေးခဲသောအ ၀ တ်အထည်များချထားပေးခဲ့ပြီး၊ ထင်းများကိုထပ်မံထည့်သွင်းထားပြီး၊ ကူရှင်များကိုဖယ်ရှားပြီး၊artအရာအားလုံးကိုဖြတ်ပြီး hy နှင့်သတ္တုတန်ချိန်။ ဒါကနှိုင်းယှဉ်ကြောင်းအစုတခုဖြစ်နိုင်သည် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသော်လည်း၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၊ ၎င်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ထင်ရှားကျော်ကြားမှုမှ ထပ်မံ၍ မဖြစ်နိုင်ပါ Lego အစုံ
နေတုန်း Batman နှင့် Scribble Cop သည် The set တွင်နေရာအနည်းငယ်သာရှိသည်၊ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ The မှအဓိကဇာတ်ကောင်များ၏ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်သည် Lego ရုပ်ရှင် 2: ဒုတိယ Part အစားချို့တဲ့သည်။ Emmet နှင့် Lucy ကို minifigure line-up တွင်တွေ့ရပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ (များသောအားဖြင့်ထူးခြားစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောစတစ်ကာများ၏ရလဒ်ကြောင့်) သည်သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကသူတို့၏တည်ရှိမှုနှင့်ပိုမိုသေးငယ်သည့်အတိုင်းအတာအထိ Unikitty / Ultrakatty, Benny နှင့် MetalBeard တို့မှဖော်ပြသည် , အားလုံးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပါဘူး။
အမှန်စင်စစ်ဤသည်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်တစ်ခုခုပါပဲ 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်။ 2014 ရဲ့ The ကြားမှ၌တည်၏ Lego ရုပ်ရှင်ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဇာတ်ကောင် - မောင်းနှင်, ဖြစ်ခြင်း Lego အုပ်စုတစ်ခုလုံး - သူရှိပါတယ်artအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သောသိမ်မွေ့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင်၎င်းကို၎င်း၏ရုပ်ရှင်နှင့်၎င်း၏အဓိကဇတ်ကောင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အနည်းငယ်မျှသာ၎င်း၏ 2019 ဆက်ဆက်၏အထင်ကရနေရာတစ်ခုကိုစွဲစွဲမြဲမြဲတည်ရှိသည့်တည်နေရာကိုဖန်တီးရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်။ အဟောင်းတွေအဘို့ Lego ပန်ကာ, ဒီperfectlyုံဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်နှင့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်၎င်း၏ရုံအယူခံဝင်နှင့်အတူအခြားအရာတစ်ခုခုအဖြစ်ကူညီပေးသည် Lego Movie-2: ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်ရအောင်။ The the the Identity ဆိုတာဘယ်မှာလဲ Lego ရုပ်ရှင်မဟုတ်ရင်မှလာသည်။
ဒါဟာတကယ်ကိုအကြွေးပဲ Lego ဤအစု၏ဒီဇိုင်းတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ထက် စုစည်း၍ သက်သေပြခြင်း။ သင် gimmick ကဲ့သို့ခံစားရရန်စတင်ခံစားရသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည် Harley Quinn ၏ပါ ၀ င်မှုဖြစ်သည်။ Green Lantern လည်းဒီနေရာမှာအသေးအမွှားလေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်၊ Lego ရုပ်ရှင်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ သို့သော် Harley သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသည့်အဖွဲ့မှထွက်လာသည်။ ဒီဗားရှင်း Batman လူဆိုးစာရင်းအတွက် cameo ရှိနိုင်ပါသည် The Lego ရုပ်ရှင် 2ဒါပေမယ့်ဒီအစုထဲသူမပါ ၀ င်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဘယ်သူမှမညည်းညူကြဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူမဟာလိုင်းတစ်ခုလုံးမှာအကောင်းဆုံးအသေးအဖွဲလေးဖြစ်လို့ရှည်လျားပြီးရှည်လျားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်း။
စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာကိုဘေးဖယ်ထားရန်၊ ၀ င်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည် 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်။ Lady Liberty ရဲ့ဓာတ်ပုံဟာဓာတ်ပုံထဲမှာဘယ်လိုထင်သလဲလို့လျစ်လျူရှုပါ။ ဒီအစုကိုလူကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးစမ်းပါ ဖြတ်. Brick Fanatics'ဆက်နွယ်လင့်များ ကျနော်တို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ဖို့။
ဒါဟာအလွယ်တကူထံမှအကောင်းဆုံးအစုံပါပဲ The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art၎င်းသည် 2019 ၏အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်မှုများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်မှာသေချာသည်။ ဇိမ်ခံကား Lego တိုင်းလမ်းအတွက်ထားကြ၏။ လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ရန်လုံလောက်သောကံကောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းလူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်။
70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ် ယခုမှာရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါ၏ ဒီနေ့ဖြန့်ချိခဲ့သည်
သီးသန့် LEGO ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art Cineworld မှာခွက်များနှင့်ရေပုံးများ →